Dhaqanka Aasiya: Caadooyinka Aasiya iyo Caadooyinka | Wararka Safarka
Maria Jose Roldan | | Shiinaha, Tailandia, Safarka Aasiya
Markaad ka fikirto Aasiya, Japan iyo Shiinaha waxay u badan tahay inay maskaxda ku hayaan inay yihiin waddamada waaweyn, laakiin xaqiiqadu waxay tahay in Aasiya ay ka kooban tahay dalal badan oo kale waana lagama maarmaan in la ogaado dhammaantood si loo fahmo Dhaqanka Aasiya iyo sida ay ugu kala duwanaan karaan meel uun.
Qaaradda Aasiya waxay ka kooban tahay 48 dal: 41 sifiican Aasiya iyo 7 Eurasia. Encyclopedia kasta waxaad ka heli kartaa magacyada dhamaan wadamada hada jira waxaadna arki kartaa inta wadan ee ka kooban qaaradani, laakiin kaala hadli maayo caadooyinka iyo caadooyinka wadan kasta, laakiin waxaan ahay waxaan kaala hadlayaa oo keliya qaar ka mid ah, kuwa aan u arko inay yihiin dhaqamo gaar ah ama ugu yaraan, oo indhahayga soo jiita oo aan doonayo inaan kula wadaago.
1 Dhaqanka Aasiya: caadooyinka iyo caadooyinka
3 Iiddii siraad
4 Dagaalkii biyaha ee Thailand
5 Kabaha off si xushmad leh
6 Lambarka sixirka Shiinaha
7 Waan ku salaamay Shiinaha
8 Ka taxaddar khad casaanka ah ee Shiinaha
9 Ha ku isticmaalin gacanta bidix gudaha Indonesia
10 Talooyin lagama helo Japan
Dhaqanka Aasiya: caadooyinka iyo caadooyinka
Adduunyada oo dhan waxaa ka jira caadooyin iyo dhaqammo badan, maxaa yeelay, dhammaantood, waa waxa innaga dhigaya inaan yeelano dareen ka mid noqoshada beel. Xaqiiqdu waxay tahay innagoo reer galbeed ah aad ayaan ula yaabi karnaa dhaqanka Aasiya, maxaa yeelay waxyaabaha qaarkood waxay naga dhigayaan inaan ka fogaanno iyaga, laakiin kuwa kale xitaa waxay bari karaan qiyam aynaan aqoon ama aanan rabin inaan aragno. Aasiya waa qaarad naga dhigi karta inaan ku aragno waxyaabo aan macquul ahayn dalal kasta oo ka mid ah. Laakiin adigoon sii dheerayn, waxaan kuu sheegayaa wax ku saabsan qaar ka mid ah caadooyinka iyo dhaqamada ugu caansan ee dhaqanka Aasiya ee laga yaabo inaad xiisayso.
Kanamara Matsuri macnaheedu waa wax lamid ah "Festifaalka biibiilaha biraha". Waxaa loogu yeeraa maxaa yeelay halyeeygu wuxuu leeyahay jinni ilko fiiqan leh ayaa ku dhex dhuumaaleysanayay xubinta taranka ee gabar dhalinyaro ah inta lagu gudajiray habeenkii arooska haweeneyda jinka ayaa shaydaan labo nin sidaa darteed tumaaliste wuxuu u qorsheeyay feyl bir ah inuu ka jebiyo ilkaha sheydaanka. Magaca awgiis waxaad u qaadan kartaa in xafladdu ay xiriir la leedahay bacriminta waxaana lagu qabtaa guga kasta Kawasaki (Japan). In kasta oo taariikhuhu kala duwan yihiin, haddana badanaa waa Axadda koowaad ee Abriil. Mawduuca ugu weyni waa xurmaynta xubinta taranka, astaan ​​si weyn uga dhex muuqata xisbigan, dhaqaalahana waxaa loo ururiyaa cilmi-baaris ka dhan ah AIDS-ka.
Dabbaaldegga Iftiinka ayaa tilmaamaya dhammaadka damaashaadka Sannadka Cusub ee Shiinaha waxayna ku dhacaan bisha koowaad ee buuxda ee sanadka. Waa habeen gaar ah, sixir leh oo nalal buuxa ay Shiinuhu rumeynayaan. Habeenkii waxaa jira kumanaan laydhadh iyo faynuusyo buuxdhaafiya guryaha iyo dhismooyinka.
Damaashaadkan waxaa lagu noolaa farxad waxaana jira dhoolatusyo, muusig, durbaanno, dhaanto, acrobats ... iyo rashka. Carruurtu waxay sitaan toosh qoysaskuna waxay isugu yimaadaan si ay bariis u cunaan waxayna ugu baaqaan nasiib iyo midnimo qoys.
Dagaalkii biyaha ee Thailand
Caadadan dhaqanka Aasiya ayaa ah loo yaqaan Songkran Festival waana ciida ugu muhiimsan Thailand. Songkran waa Sannadka Cusub ee Buddhist-ka, dhaqan ahaan dadku waxay qoyaan tirooyinkooda buudha waxayna u muujiyeen ixtiraam sidan. Waqti ka dib dhaqankan ayaa la beddelay oo wuxuu noqday dagaal biyo u dhexeeya dadka, maaddaama dhinacyo badan oo nuucaan ah ay sidoo kale jiraan khamri badan. Waxay ka dhacaysaa Khao San Road ee Bangkok.
Kabaha off si xushmad leh
Mid kale oo ka mid ah caadooyinka dhaqanka Aasiya ayaa ka kooban kabaha guriga kala bax waa wax ku faafay Aasiya oo dhan. Tan waxaa loo sameeyaa inay tahay calaamad ixtiraam ama sababtoo ah dabaqa waa inuu ahaadaa mid nadiif ah. Marka haddii aad waligaa booqanayso qof Aasiya ka socda oo aad aadi doontid gurigiisa, waxaa muhiim u ah iyaga inaad kabahaaga uga tagto banaanka gurigooda si ay u tahay ixtiraam.
Lambarka sixirka Shiinaha
Ma ogtahay in Shiinuhu aaminsan yahay lambar sixir ah? Haa, waxay ku saabsan tahay lambarka 8, taas oo sida ay aaminsan tahay Shiinuhu ay tahay nasiib nasiib aad u wanaagsan oo ku saabsan lacag iyo kobcin. Caadi ahaan lamaanayaasha raba barwaaqada waxay u muuqdaan inay is guursadaan 8-da bil kasta, xitaa way ka sii fiicantahay haddii ay tahay 8-da Ogast. Sida haddii aysan taasi ku filnayn, waxaad xiiseyn doontaa inaad ogaato in falaga Shiinaha uu ka kooban yahay 8 calaamadood oo burji ah. Waxay sidoo kale leeyihiin 8 qodob oo wadnaha ah, iwm. Isku dhac fudud ama 8 runti ma tiro gaar ah baa?
Waan ku salaamay Shiinaha
Waa inaad taas ogaataa Shiinaha looma salaamo sida reer galbeedka, iska ilaali dhunkashada maxaa yeelay waad xumeyn kartaa qof. Waxaa fiican inaad gacmaha isqabsato si aad u siiso salaan sharaf leh. Habkan salaanku wax badan buu iskaga hor iman karaa salaanta jacaylka leh ee aannu u qabno dadka aan qaddarinno iyo kuwa aan hadda la kulannay.
Ka taxaddar khad casaanka ah ee Shiinaha
Haddii aad ku jirto kulan ganacsi oo aad u baahan tahay inaad xoogaa qoraal ah soo dirto ama aad dirto qoraal, weligaa ha ku samayn khad casaan ah sababta oo ah hooska midabkaas ah ayaa loo adeegsadaa soo-jeedinno iyo cabashooyin aan habboonayn. Markaa waxa ugu fiican ee aad sameyn kartaa waa inaad qalin ku heshaa jeebka jeebkaaga oo leh khad madow ama buluug ah, habkaas waxaad hubtaa inaadan ku xadgudbin qof kasta oo leh midabka midabka.
Ha ku isticmaalin gacanta bidix gudaha Indonesia
Marka laga hadlayo Indonesia tusaale ahaan, waa inaadan waligaa gacantaada bidix u adeegsan inaad shey siiso qof kale maaddaama habdhaqankani astaan ​​u yahay xushmad la’aan, si kasta oo ay tahay u isticmaal gacantaada midig. Sidoo kale waxay la mid tahay salaanta ama xiriir kasta oo lala yeesho qof kale, gacanta bidix ayaa ka wanaagsan inaadan isticmaalin, had iyo jeer waxay noqon doontaa mid la jecel yahay in la helo bilaash xaq ah.
Talooyin lagama helo Japan
Haddii aad isku aragto Japan, dhulka qorraxdu soo baxdo weligaa ha ku caabbin makhaayad. Waa caado ku jirta dhadhanka xun waxaadna ku xumeyn kartaa qofka ku daweeyay.
Ka waran Dhaqanka Aasiya? Waxaan kaaga sheekeeyay qaar ka mid ah dalalkooda, ma waxaad dooneysaa inaad noo sheegto wax intaa ka badan oo aad ogtahay?
Inta badan wadamada la booqday ee Aasiya
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Safarka Aasiya » Shiinaha » Dhaqanka Aasiya
Waa macluumaad yar, laakiin haddii aadan waxba aqoon, taasi waa hagaag. wax waa wax maalin walbana wax yar ayaad ka baranaysaa
Ku soo jawaab Arsenio Guerra
5 barnaamij oo aad waxtar u leh fasaxaaga xagaaga dambe